Tattoo Dhizaini 2021 - TattooIP.com
Musikana achiri kuyaruka
Mushure memakumi mapfumbamwe
butter butter duku
Muswe wembudzi wembudzi
Katsi diki diki
Bhuruu rine ruvara
Diki diki inotumbuka
Ruva rine ruva
Ruva muviri wechiRungu
Qiti Dasheng Khos Wukong
Pamusoro pefudzi dhiragoni
Dema uye chena impermanence
Ngirozi ine mapapiro matanhatu
Iro ziso raMwari
Iro ziso raHorus
Iro ziso rekuziva zvese
Zviuru zvemapepa crane
Iyo yepasi pemvura
Nyeredzi dzine nyeredzi
mhepo inopisa mhanza
Diki revanilla ruva
Mwedzi uye zuva
European uye American vintage
Mudiki manji murume
Little dhayi yero
Tumira nyeredzi hombe
Mapoka enyeredzi gumi nembiri
Iro ziso rese
munyoro uye wakanaka
Ma tattoo maitiro
Sei mu tattoo asina kuda kundiitira tattoo kumeso?Akandiyambira kuti ndinyatso chenjera nema tatto echiso kuti zvinogona kuchinja zvinhu zvakawanda muhupenyu hwangu.Airevei chaizvo?
Mukuwonekera ma tattoos anonyanya kugamuchirwa munharaunda ikozvino,kupfuura zvavaimboita kare,zvisinei ma tattoos akatarisana haana kugamuchirwa kwakafanana mubhizinesi renyika.Icho chidiki chidiki chemifananidzo iyo iwe yaunoda kuisa pane yako kume......
Ndeipi imwe tattoo iyo iyo tattoo tattoo yakaramba kukupa?
Pandakazowana iyo tattoo yandaida ndakakumbira kuti iite anenge 3cm skira asi muimbi akaramba.
Akataura kuti hazvingashande zvakanaka pahukuru ihwohwo.Pandakanga ndichiwana pane yangu yepazasi mbabvu / padivi nzvimbo saizi yakanga isiri hombe kwan......
Kana iwe waizofanira kuwana tattoo chingave chii?
Ndatova ne tattoo,uye iyo inonamira kanji nekuda kwemvura,izvo zvaimiririra zvinhu zvakawanda kwandiri pachangu: zita rangu rekuti Raen (rakataurwa semvura),Ndakafarira kufamba nekutamba mumvura kubvira ndichiri mwana mudiki,uye irwo maoko pasi izvo ......
Chii chinonzi black work tattoo?
Heano matatu eangu matema enki tatoo.
Ndeupi mutsara wakarurama \_"Ndakaona iyo tattoo kumashure kwako\_" kana \_"Ndakaona iyo tattoo kumashure kwako\_"?
\_"Kumashure kwako\_" zvinoita sekunge munhu ari kukuona senge ndine musana wako.
Kana iwe uri kutaura nezvekunyora kana mifananidzo inki YAKO kumashure kwako senge tattoo,
ipapo pane Chaizvoizvo kumashure kwako.
Tattoo yaKim Taehyung ndeyechokwadi here?
Uri kutora nezve izvi?
Um hapana.Izvi hazvisi zvechokwadi.
Akanyora izvi akapfeka mazuva apfuura.Unogona kuona i......
Ko vamwe vanhu havazoendi kuchitoro nekuti pane tattoo parlat muplaza imwechete (tichifungidzira vanhu vane sketchy vanhu vanorembera muma tattoo shopu)?
Ngatitii tifunge kuti vanhu vane sketchy vanonamira pa tattoo parlors.
Izvo zvinogona kunge zviri zvechokwadi 20u201330 makore apfuura.Asi ikozvino,ma tattoos ave kuita mukurumbira.Tattoo parlors dzave kutenderera mu upscale mall ako! .Hapachina z......
Chii chinokuvadza zvakanyanya, tattoo kana kuboora?
Zvinoenderana.A tattoo rinokuvadza kupfuura kuwana rimi rin'i,mune yangu ruzivo.Asi kuwana mawoko angu akaboorwa kwakarwadzisa nzira nenzira yakanyanya kudarika tattoo! ,Vari kuomesa kusingaperi uye vachikwirana nehembe yako kunyangwe mushure mekubay......
Kana ane makore gumi nemasere-ari pamutemo zera rekutora tattoo,sei vamwe vevateki vemitambo vachiramba ivo pavanobvunza imwe pachiso chavo?
Ndakanga ndine mumwe wemakore gumi nemasere ekugara mufurati rangu rimwe zuva ndichiita kumwe kudzidziswa nevashandi vekugadziridza sezvo ivo vaive vachiisa zvishandiso zvehungwaru pasi rese semutsetse wekereke..Akandibvunza kuti zvakanditorera nguva......
Chii chausingafanirwe kudya mushure me tattoo?
Yakagadzirirwa-yakagadzirwa majuzi uye sodas;
Chikafu chakabikwa,kunge machipisi,pastries uye zvimwe chikafu chinonaka,kudya kwekukurumidza; nyama yenguruve uye yakaomeswa nyama dzakadai satsva uye dzakapfungairwa soseji,ham,bacon,mozzarella uye s......
Iwe unofunga kuti ruoko rwaJungkook tattoos rwakaipa here?
Aihwa.Iwe unoreva tatto iyo yakaiswa paminwe yake kurudyi?Iyo ine zvakawanda zvinoreva.Semuenzaniso:
ARMY \_u003d Isu
A isina mutsara wepakati inoratidzika senge padivi pasi V ch......
Unogona kutumira iyo tattoo selfie kana mufananidzo?